Variety Collection of MoeMaKa websites … | MoeMaKa Burmese News & Media
Variety Collection of MoeMaKa websites …
မိုးမခ သောင်းပြောင်းထွေလာ ကောင်းနိုးရာရာ
ကမာရွတ်သား၊ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃
မိုးမခ ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်၊ ပြီးတော့ မိုးမခ စာအုပ်ဆိုင်၊ ပြီးတော့ တလောက ပြန်ပြီး ရှာဖွေသိမ်းဆည်းမိတဲ့ မိုးမခ ၂၀၀၈ ရှေ့ပိုင်းက ၀က်ဆိုက်ဟောင်းတွေကို ပြန်ပြီး စီစဉ်နေရာချထားဖြစ်တာတွေကို တစေ့တစောင်း ကြည့်နိုင်အောင် ဒီကနေ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
မိုးမခဈေးဝယ်လမ်းညွှန် နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ ၁၀ ခု
Ocean Beach SF – ဆန်ဖရန်ပင်လယ်ကမ်းခြေ
Ocean Beach , San Francisco ဆန်ဖရန်မြို့တော် အနောက်ဖက် ပင်လယ်သောင်ကမ်းခြေ Ocean Beach isabeach that runs along the west coast of…
SF Cliff House – ဆန်ဖရန်ကမ်းပါးဆိုင်
The Cliff House isarestaurant perched on the headland above the cliffs just north of Ocean Beach, on the…
SF China Town – ဆန်ဖရန်တရုတ်တန်း
Chinatown – San Francisco ဆန်ဖရန်တရုတ်တန်း အရောက်သွားသင့်တယ်။ The Chinatown, centered around Grant Avenue and Stockton Street in San Francisco, California, is…
MLA – Design & Drafting Service
MLA design and drafting provides Residential design and planning, Remodel design and planning, Building plan preparation, Topographic Survey Drafting, General…
Favourate Burmese Food in Mandalay (အကြိုက်ဆုံး မန္တလေး အစာ
List of Burmese Favorite Food in Mandalay … together with the names of famous stalls … ခုနက အစားအသောက်ညွန်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ မန်းလေးမှာ…
Bumese Travelougue by Maung Yin Nga Tays (မောင်ရင်ငတေ၏ လမ်းညွှန
Bumese Travelogue by Maung Yin Nga Tays (မောင်ရင်ငတေ၏ လမ်းညွှန်များ) http://moemaka.com/archives/category/featured-writers/%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B1%E1%80%90…
San Francisco-Oakland Bay Bridge (ဆန်ဖရန်ဘေးဘရစ်ဂ်ျ)
The San Francisco–Oakland Bay Bridge isacomplex of bridges spanning San Francisco Bay of the U.S. state of California….
Top 10 Burmese Food – (လူကြိုက်အများဆုံး ဗမာစာ)
ကမ္ဘာကျော် Time မဂဇင်း၏ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာရှိ ခရီးသွားကဏ္ဍ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်တွင် မြန်မာပြည်အလည်သွားသူများ မြည်းစမ်းကြည့်သင့်သော အစားအသောက် ဆယ်မျိုး အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ http://moemaka.com/archives/37371…
SF Legion of Honor – သူရဲကောင်းဗိမာန်
California Palace of the Legion of Honor (Museum) The California Palace of the Legion of Honor isapart of…
SF COIT Tower – ဆန်ဖရန် မျှော်စင်
Coit Tower, also known as the Lillian Coit Memorial Tower, isa210-foot tower in the Telegraph Hill neighborhood of…
မိုးမခ စာအုပ်ဈေးဆိုင်မှာ တင်ထားတဲ့ နောက်ဆုံး စာအုပ်စာရင်း ၁၀ ခု
(အတော်များများက ဖရီးဒေါင်းလုပ်တွေပါ။ Download ဆိုတဲ့ လင့်ခ်ကနေ တိုက်ရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ Amazon Kindle Store မှာ တင်ထားတဲ့စာရင်း ဖြစ်ပါတယ်)
Remembering Kye Mon U Thaung…
Remembering Kye Mon U Thaung (AUng Bala) – Selection of Articles by MoeMaKa [Kindle Edition]
Honoring Suu 66 – Selection of…
Honoring Suu 66 – Selection of Articles from MoeMaKa [Kindle Edition]
Aung Way – Building Fifth Nation…
Aung Way – Building Fifth Nation of Burma အောင်ဝေးရဲ့ အာရ်အက်ဖ်အေ အပတ်စဉ်ရေဒီယိုမှာ တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်၊ ရဲရင့်ငယ် စုစည်းပါတယ်။ မိုးမခက ပြန်လည် တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Tin Moe – How to write Burmese…
Tin Moe – How to write Burmese Poem (2011) ကဗျာဆရာ တင်မိုး ၁၉၈၅ခန့်က ရေးသားခဲ့သော မြန်မာကဗျာစပ်နည်း စာသင်သားသုံး ကျောင်းစာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
Meeting with Buddha & Other…
Meeting with Buddha & Other Poems by Tin Moe (2000) Hundred Moons Publishing House presents poems by Tin Moe while he was in exile.
2 Years Anniversay of passing of…
2 Years Anniversay of passing of Tin Moe – Nay Choo ကောင်းကင်စိတ်နဲ့ မြေလိုကျင့်တဲ့ ဧည့်သည်ကြီး – နေခြူး၊ တင်မိုး
MoeMaKa Burmese Monthly Vol 1 No…
MoeMaKa Burmese Monthly Vol 1 No2(Sept 2013) Selection of Burmese Articles from MoeMaKa Daily Internet Website into Monthly Special Edition.
Buy MoeMaKa Phone Card to show…
click here to buy our phone card မိုးမခ မှာ ဖုံးခေါ်ပါ – ဒီနေရာကနေပြီး ဖုံးကဒ်များ ၀ယ်ယူခြင်းဖြင့် မိုးမခ၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေအလှူကို ထောက်ပံ့ အားပေးရာ ရောက်ပါသည်။
Honoring Suu 66 – Reflection by…
Honoring Suu 66 – Reflection by Maung Maung One MoeMaKa presents Suu 66 special edition – written by Maung Maung One, The Perspective of Suu
Aung Way – Spirits of 88…
Aung Way – Spirits of 88 Revolution in Burma FREE COPY – SUGGESTED DONATION FOR A FREE E-BOOK =2US$
မိုးမခ ဆိုက်အဟောင်းက စာမူကောင်းလေးတွေ ဆောင်းပါးဖတ်ချင်စဖွယ်လေးတွေကို စာပွဲထိုင်နိုင်ဖို့ လင့်ခ်လေးတွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ပြန်ကူးပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ နဲ့ …
၂၀၀၉ မိုးမခ – ဓာတ်ပုံများ